Part 1. Samsung Paswọdu Iweghachite maka Smart ekwentị mkpanaaka na Laptọọpụ
Part 2: Olee otú Tọgharia Samsung laptọọpụ Windows Paswọdu
Na exponential ibu na dijitalụ ụwa, na ịchekwa faịlụ, nchekwa, foto, ndetu, na kaadị nkọwa dịghị pụtara ọrụ. Kwere nghọta, nche aghọwo a nchegbu. Ị na-a paswọọdụ maka ọ bụla na saịtị na ị na-abanye n'ime, ma ọ bụla igbe akwụkwọ ozi dị na ị na ohere. Otú ọ dị, ọ dịghị mfe n'ihi na otu onye icheta ihe nile okwuntughe si Gmail, Hotmail, Facebook ka volt, Dropbox na ekwentị mkpanaaka gị. Ebe a bụ otú ị nwere ike ịga banyere mgbake nke okwuntughe Samsung smart igwe na laptọọpụ site a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu.
1. Ị kpọghee ekwt gị Samsung ngwaọrụ eji Google Banye
Ọ bụrụ na i guzobere a ụkpụrụ mkpọchi maka ekwentị gị ma chefuo ziri ezi na ụkpụrụ, ị nwere ike mfe Ị kpọghee ekwt ọ na-eji Google akaụntụ nbanye.
• Mgbe agbalị otutu ugboro na-ekwesịghị ịdị na paswọọdụ (ụkpụrụ), ị ga-ahụ a "Chefuru Paswọdu" nhọrọ na mkpanaka gị na ihuenyo.
• Mgbe ị na họrọ "Chefuru Paswọdu" nhọrọ, ị ga--jụrụ ịbanye gị Google akaụntụ na aha njirimara na paswọọdụ. Ọ bụrụ na ị na-agba multiple Google akaụntụ, ị ga-abanye nkọwa nke na akaụntụ nke ị na-eji iji melite ekwentị gị na mbụ.
• Ozugbo ị nbanye ịga nke ọma, ekwentị gị ga-unlocked na ị ga-enwe ike melite a ọhụrụ mkpọchi / paswọọdụ ọzọ. Bazzinga.
2. Ị kpọghee ekwt gị Samsung na ngwaọrụ na iji Chọta My Mobile Ngwá Ọrụ
Chọta My Mobile bụ ihe owuwu nyere site Samsung na ya nwere ike nnọọ mfe eji Ị kpọghee ekwt gị Samsung Ngwaọrụ. Ihe niile ị chọrọ bụ ụghalaahia Samsung akaụntụ (kere mgbe zuo / ịtọlite ​​ekwentị).
• Gaa Samsung Chọta My Mobile na-nbanye gị Samsung nkọwa akaụntụ.
• Ke n'aka-ekpe n'akụkụ nke Chọta My Mobile interface, ị ga-enwe ike ịhụ na ngwaọrụ gị (ma ọ bụrụ na ọ ga--aha).
• Site otu ngalaba, họrọ nhọrọ "Ị kpọghee ekwt My ihuenyo" na-eche maka sekọnd ole na ole (a nwere ike iwe a mgbe dabere na gị internet ọsọ).
• Ozugbo usoro ga-okokụre, ị ga-enweta a ngosi agwa na mkpọchi ihuenyo e unlocked.
• Lelee ekwentị gị, na ị ga-ahụ ya unlocked.
3. Ihichapu gị Samsung na ngwaọrụ na iji Android Ngwaọrụ Manager
Ọ bụrụ na ị nwere na mbụ nyeere Android Ngwaọrụ Manager na ị ngwaọrụ, ị nwere ike nnọọ mfe ihichapu ya data remotely iji Android Ngwaọrụ Manager. Ozugbo ị ihichapu data, ị ga-enwe ike melite ngwaọrụ gị ọzọ na a Google akaụntụ na a ọhụrụ mkpọchi ihuenyo.
• Iji ọ bụla nchọgharị, gaa ebe a
• Sign na-eji nkọwa nke gị Google akaụntụ (kwesịrị otu Google akaụntụ nke ị na-eji na mbụ na ekwentị gị)
• Ọ bụrụ na ị nwere otutu ngwaọrụ jikọtara ya na otu Google akaụntụ, họrọ onye a na-unlocked. Ọzọ, ngwaọrụ ga-e họrọ ndabara.
• Họrọ mkpọchi, na-abanye na a nwa oge paswọọdụ na window pụtara. I nwere ike ikwu na mgbake ozi (nhọrọ).
• Họrọ mkpọchi nhọrọ, na ihe ịga nke ọma ẹkụre usoro, ị ga-ahụ buttons maka mgbanaka, mkpọchi na ihichapu.
• Na ekwentị gị, a paswọọdụ ubi gaara pụtara, na nke ị na mkpa pịnyere nwa oge paswọọdụ. Nke a ga-Ị kpọghee ekwt ekwentị gị.
• The ihe ikpeazụ bụ na-aga gị mkpọchi ihuenyo ntọala na gbanyụọ nwa oge paswọọdụ. Mere.
Mkpa: Iji a Usoro maka Ịkpọghe ekwentị ga-akwụsị niile data- ngwa, photos, music, ndetu wdg Otú ọ dị, data synched na Google akaụntụ ga-eweghachi, ma ndị ọzọ nile data ga-ehichapu na niile ngwa ọdịnala na ha Associated data ga-uninstalled.
4. Ịtọgharị na ngwaọrụ gị Factory Ntọala
Resetting gị Samsung na ngwaọrụ Factory Ntọala bụ otu nke mgbagwoju ụzọ Ị kpọghee ekwt ekwentị gị. Otú a bụ abughi mfe ma ọ bụ ọ na-egbochi ọnwụ nke data. Ma ọ bụrụ na, mgbe ọ bụla nke gara aga ụzọ na-eme adịghị ọrụ, Ị nwere ike ịpụ maka nke a.
• Gbanyụọ ekwentị.
• Pịa ma onu Mpịakọta Up, Mpịakọta Down na Ike igodo, ruo mgbe a ule ihuenyo egosi.
• Jiri Mpịakọta Down bọtịnụ ịnyagharịa Factory Tọgharia nhọrọ, na pịa ike bọtịnụ họrọ ya.
• Mgbe ị na na na Android System Iweghachite ihuenyo, na-eji Mpịakọta ala isi ịnyagharịa ala na "ehichapụkwa ụbọchị / factory tọgharịa" nhọrọ. Họrọ ọ na-eji ike isi.
• Họrọ "ee," nhọrọ, na-egosi na hichapụ ihe niile ọrụ data.
• Ozugbo factory nrụpụta na-okokụre i nwere ike iji Mpịakọta na Ike igodo ka a mata na họrọ "Reboot usoro ugbu a" nhọrọ na ike nrụpụta ga-ezu na ekwentị gị ga-adị mma na squeaky ọcha.
Yiri Samsung color, laptọọpụ paswọọdụ nwekwara ike tọgharịa ole na ole mfe nzọụkwụ, na-enweghị eji ihe ọ bụla ọzọ software. Ma mkpa ka ị usoro ya, ma ọ bụ na ị chọrọ ida gị data. Nrụpụta nwere ike mere site iwu ozugbo, na-arụ ọrụ a mma mode. Nke a bụ otú ọ na-aga.
• Malite gị laptọọpụ na na-na na na ịpị F8, ruo mgbe a menu egosi.
• Họrọ Nchekwa na ọnọdụ na iwu ozugbo si menu.
• Pịa Malite na pịnyere 'cmd' ma ọ bụ 'iwu' (na-enweghị ruturu), na search mmanya. Nke a ga-emeghe iwu ozugbo window.
• Ụdị 'net ọrụ' na kụrụ Tinye. Nke a ga-egosipụta niile njirimara akaụntụ gị na kọmputa.
• Ụdị 'net ọrụ' 'aha njirimara' 'Paswọdu' na kụrụ Tinye (dochie aha njirimara na paswọọdụ na gị).
• Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa na-nbanye ọhụrụ na aha njirimara na paswọọdụ.
> Resource> Samsung> Samsung Paswọdu Iweghachite maka Smart ekwentị mkpanaaka na Laptọọpụ